Umbhali Usebenzisa I-Manga Ukukhuluma Ngokuqothulwa Kwesizwe sase-Uyghur eChina - Okunye
Umbhali Usebenzisa I-Manga Ukukhuluma Ngokuqothulwa Kwesizwe E-China Ngokumelene Nobuhlanga I-Uyghur
Enye futhi indatshana yezindaba amasayithi amaningi e-anime futhi abagqugquzeli ngeke ihlanganise.
Umculi wamanga waseJapan kubizwe UTomomi Shimizu iletha ukuqwashisa kubantu abaningi eJapan. Ukuqwashisa ngokwelashwa kwe-Uyghur, iqembu lobuhlanga elibhekene nengcindezelo ehleliwe nokubulawa kwabantu eChina.
Ukucacisa kabanzi, umenzi wecala yiCCP (Iqembu LamaKhomanisi LaseChina).
Lokhu kucindezelwa ngesihluku kwenzeka ngaphakathi IXinjiang.
Kusetshenziswa iManga ukuletha ukuqwashisa ngengcindezelo
Ngamazwi omlobi uqobo:
'' IJapan akumele ibheke nje ingcindezelo [yama-Uyghurs] njengento eyenzeka kude. Ngifuna abantu abaningi banake lolu daba - ikakhulukazi uma kubhekwa okutholwe uhulumeni wase-U.S. ”
Njengoba kubikiwe ngu Japan Phambili , bese ithi:
“Ngokusho kweJapan Uyghur Association, kunabantu abangama-Uyghur abaphakathi kuka-2 000 no-3 000 abahlala eJapan. Sekuyiminyaka eminingana zingakwazi ukushayela noma ukuthumela izihlobo eXinjiang.
Lokhu kungenxa yokuthi uma umuntu wase-Uyghur eXinjiang ethinta noma ngubani waphesheya kwezilwandle, kubandakanya neJapan, ubizwa ngokuthi “uyisishoshovu” bese efakwa ekamu lokuhlushwa. Izihlobo eziningi emakhaya zigcinwe noma zalahleka, futhi akunakwenzeka ukwazi ukuthi ziphephile yini.
Abantu abaningi base-Uyghur banezihlobo zabo ezibanjwe ngabaphathi bezokuphepha baseChina, noma baphoqelelwa ukuba babe yizinhloli kwabanye abantu eXinjiang noma kubantu ababuyela eChina. Uma umuntu wase-Uyghur ohlala phesheya kwezilwandle ebuyela eChina, bayophelela ekamu lokuhlushwa.
EXinjiang, kunamakhamera okuphepha emakhaya abantu base-Uyghur, kanti abantu base-Uyghur eJapan bahlala nsuku zonke besaba ukuthi bazobanjwa ngocingo yiziphathimandla zaseChina. ”
Izenzo zonya ezibhekiswe kuma-Uyghur ziboniswe kumanga
“Leli manga lisuselwa ekuhlangenwe nakho okubuhlungu kukaMihrigul kokuboshwa nokuhlukunyezwa ngaphandle kwesizathu - nokulahlekelwa yingane eyashona ngemuva nje kokuthathwa.
Indaba yazwakala emhlabeni wonke. Ihunyushelwe kwezinye izilimi eziyi-15 kubalwa nesiNgisi, yasakazwa emhlabeni wonke ku-inthanethi. ”
Amasayithi WamaManga Piracy Abukwe Izikhathi Eziyizigidi ezingama-200 + NgoDisemba 2020 (Japan)
Indawo yase-Chinese Anime Bilibili Isisulu Sokukhansela Amasiko, Kepha Ingabe Kufanelekile?